तपाईको आज - Baikalpikkhabar
श्री शालिवाहनीय शाके १९४२, ने. सं. ११४०, वि.सं. २०७७ साल कात्तिक २५ गते मङ्गलबार, १० नोभेम्बर २०२० । कात्तिक कृष्णपक्षको दशमी तिथि २४ः०० बजेसम्म, उप्रान्त एकादशी, नक्षत्र मघा ०८ः१३ बजेसम्म, उप्रान्त पूर्वफाल्गुनी, चन्द्रमाराशि सिंह, सूर्योदय ६ः२० र सूर्यास्त ५ः१४ बजे हुनेछ ।
समय राम्रो छ । सामाजिक मान–सम्मान र प्रतिष्ठा बढ्नेछ । रमाइलो यात्राको अवसर मिल्ला ।
समय मध्यम् खालको छ । कार्य व्यस्तता बढे पनि खासै उपलब्धि नहोला । अरूको काममा समय र धन खर्च हुनेछ ।
समय सामान्य खालको छ । व्यापार–व्यवसायमा खासै उपलब्धि देखि“दैन । साथीभाइबाट धोका होला ।
समय राम्रोे छ । विशेषगरी प्रशासनिक र सामाजिक कामको विशेष जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ला ।
पठन–पाठन तथा लेखन कार्यमा रुचि बढ्नेछ । बिछोडिएका साथीभाइहरूसित रमाइलो भेटघाट होला ।
समय मध्यम् खालको छ । बोलीको कारण व्यवसायमा बाधा आउला । वैदेशिक यात्राको लागि उपयुक्त समय छ ।
समय सामान्य खालको छ । वैदेशिक क्षेत्रको कामबाट खासै सन्तोषजनक प्रगति छैन । संयमित भएर अगाडि बढ्नु होला ।
समय उत्तम खालको छ । भूमि, वाहन प्राप्त हुने सम्भावना छ । राजनीतिक क्षेत्रमा भने खासै प्रगति देखि“दैन ।
समय मध्यम् खालको छ । तीर्थयात्राको सुवर्ण अवसर मिल्ला । समाजका प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूसित भेटघाट होला ।
बौद्धिक क्षेत्रका कामहरू सफल हुनेछन् । नोकरीमा भने झमेला आइपर्ला । आफन्तबाट नै विश्वासघात नहोला भन्न सकिन्न ।
सामाजिक कामबाट सुख–सन्तोष मिल्नेछ । अधुरा कामकाजहरू पूरा हुनेछन् । साथीभाइको सहयोग राम्रै मिल्ला ।
सयम उत्तम खालको छ । सरकारी जागिरमा बढुवा तथा स्थानान्तरणको प्रबल सम्भावना छ । यात्राको लागि उपयुक्त समय छ ।
मङ्गलबार, २५ कार्तिक, २०७७, बिहानको ०९:४९ बजे